मानव समूदायलाई लज्जित तुल्याउने रुकुम घटना – Karnalisandesh
मानव समूदायलाई लज्जित तुल्याउने रुकुम घटना
प्रकाशित मितिः १८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १८:०९ May 31, 2020
यतिबेला नेपाली भूमिमाथि छिमेकीले खुट्टा टेकिरहेको छ। लिम्पियाधुरा क्षेत्रमाथि जबरजस्ति भारतीय उपस्थितिका विरुद्ध सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजुट भएर लड्नु पर्ने बेला छ। अर्को तर्फ कोरनाको कहरले देश लकडाउनमा छ। आर्थिक र रोजगारमा प्रतिकुल असर पारेको छ। यसबाट कसरी जोगिने भन्ने अर्को समस्या आइलागेको छ।
विश्व मानव जगत कोरोनाबाट त्राहिमाम बनेको छ। कोरोनाबाट कसरी बाँच्ने र अरुलाई कसरी बचाउने भन्ने बेला छ। यस्तो संटकका बेलामा सबै मिलेर सद्भाव र प्रेम बाड्न आवश्यक हुन्छ।
बिडम्बना भन्नुपर्छ यहि बेला रुकुमको नरसंहारले विश्वलाई ब्युझाएको छ। हाम्रो विद्यमान कानूनमा जातीय छुवाछूत कसुर ऐन उल्लेख छ। उक्त ऐन बलियो नभएको हो कि ? कानून कार्यन्वयन गर्ने सरकार कम्जोर भएको हो ? के कारण हाम्रो समाजमा जातीय तथा यस्ता नरसंहारका घटनाहरु हुन जान्छन् ? मेरो प्रश्न आज पनि त्यहीँ जातीय भेदभाव र छुवाछूतका बर्बर घटना किन भइरहेका छन्। हाम्रो समाजमा घटिरहेका यस्ता घटनाहरुको निरन्तरता कहिलेसम्म हो ? मानव समूदायलाई लज्जित तुल्याउने खाले यस्ता घटनाको जिम्मेवार को बन्छ ?
यो कस्तो विडम्बना हो ? जातकै आधारमा प्रेम गर्न नपाइने ? प्रेममा बहिष्करण हुनुपर्ने ? अझै पनि जातीय छुवाछूत र भेदभावको सिकार हुनुपर्ने ? कस्तो लज्जास्पद स्थिति हो ? हाम्रो देश नेपालमा अझै पनि विभेद मुक्तिका लागि आवाज उठाउनु पर्नेमा हामी अन्तै कतै अल्मलिएका त छैनौं ? एकपटक आफ्नो छातिमा हात राखेर विचार गरौं, अन्तर जातीय प्रेम गरेकै कारण मृत्युवरण हुनु पर्ने यो कस्तो समाज हो ? मानिस मानिसबीच यत्रो विभेद ?
रूकुम पश्चिममा भएको अत्याचारी, आततायी, पाश्विक र जघन्य अपराधपूर्ण घटनालाई राजनीतिकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप नगरीयोस्। वास्तविक अपराधीहरूको पहिचान गरि तत्काल सार्वजनिक गर्न र कारबाही गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ।
वैज्ञानिक युगमा पनि हाम्रो नेपाली समाजमा यस्ता पाखन्डीहरूको अपराधीक गतिविधिले समाज कहाँ छ भन्ने ठूलो महत्त्वपूर्ण प्रश्नन उठाइ रहेको छ। यस्ता अपराधीहरूलाई सरकारले बचाउ होईन हदैसम्मको सजाय दिनुपर्छ। अनिमात्र हाम्रो समाजवाट जातीय छुवाछूत जस्तो मानवता विरोधी अमानवीय व्यवहार गर्ने ती रक्त पिपाशु फासिष्टहरू डराउनेछन् र विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्न सजिलो हुनेछ।
उक्त आततायी घटना आपत्ति प्रकट गर्न लायक छ। हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरुको पुरातन चेतना र उग्रहिन्दु अतिवादी सोचहरु बदलिनु् जरुरी छ। यसरी भन्दै गर्दा हिन्दुधर्ममाथि कुनै प्रश्न गर्न खोजिएको अर्थ नलागोस्। तर, हिन्दु धर्मका नाममा हुने छुवाछुत जस्तो अमाविय भेदभाव गर्ने यस्ता उग्रवादीहरुले छातिमा हात राखेर भन्नु सक्नुपर्छ, के दलित मानिस होइनन् र ? के हाम्रो समाजमा मानविय हैसियत छैन र ? के हाम्रो दिल दुख्दैन र ? के हाम्रो आत्मसम्मान सानो छ र?
रुकुम घटनाका बारेमा छानविन समिति बनेको छ। उक्त समितले राजनीतिक पूर्वाग्रही र राजनीतिक हस्तक्षेपरहित काम गरोस्। आन्दोलनकर्मीहरु पनि संम्यम बन्नुपर्छ। यो बेला सबैले संम्यम हुने समय हो। दोषिहरूलाई कडाभन्दा कडा कार्वाहीका लागि सबैले माग गर्नुपर्छ। दोषीलाई कारबाही होस्। न्याय नमरोस्।
जनताले समाजवादी पार्टीलाई यस कारण अनुमोदन गर्नेछन्…
प्रचण्डले माओवादी केन्द्र विघटन गर्न खाेजेकै हुन्?